नगद छैन ? अब यसरी पाइन्छ तरकारी - नेपाली खोज
काठमाडौँ, १० पुस: के तपाई काठमाडौँको नक्सालस्थित तरकारी तथा फलपूmल बजारमा तरकारी तथा दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिद गर्न जाँदै हुनुहुन्छ ? यदि हुनुहुन्छ भने अब तपाईले अब पैसा नबोकिनकनै गए पनि हुन्छ । पैसा बोक्दा चोरी हुने, हराउने तथा खुद्रा नभएर तपाईलाई कुनै समस्या पर्ने छैन किनकी केन्द्रीय बैंकले सो तरकारी बजारमा अब क्यूआर कोडमार्फत भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाएको छ ।
समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रविधिमैत्री तुल्याउने सन्दर्भमा क्यूआर कोडको प्रवद्र्धनले ठूलो योगदान पु¥याउने विश्वास गभर्नर अधिकारीले व्यक्त गर्नुभयो । “यो प्रविधिको प्रयोगले नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन त गर्छ नै, मुलुकको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमा समेत ठूलो योगदान पु¥याउनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
चीन, भारत, अमेरिका, युरोप तथा जापानलगायत देशमा अधिकांश कारोबार क्यूआर कोडमार्फत हुने गरेको छ । सुरक्षित कारोबारका लागि महत्वपूर्ण मानिएको उक्त प्रणालीको प्रवद्र्धनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सकारात्मक हस्तक्षेप गर्दै प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । (रासस)
‘बो*क्सी’ आरोप लगाउँदै नि*र्घात कु*टपि*ट